Home TAFIKA ASIA FOOTBALL Denis Cheryshev tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Nohavaozina farany teo Septambra 23, 2018
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno amin'ny rosianina Rosiana izay fantatra amin'ny anaram-bosotra; "Kaomionan'ny World Cup 2018". Ny tantaran-tantaran'i Denis Cheryshev momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-mitranga mahatalanjona hatramin'ny fotoan'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny laza, ny fiainam-pianakaviana / ny fiaviana, ny fiaviany ary ny maro momba ny OF-Pitch (tsy dia fantatra loatra) momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny tanjony amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany FIFA 2018 natao tao amin'ny firenena niaviany. Na dia izany aza, mpankafy vitsivitsy ihany no mahafantatra momba ny Bio Bio Denis Cheryshev izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Denis Cheryshev ny tantaram-pitiavam-pitiavam-bahaon'ny zaza tantely bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Voalohandohan'ny fiainana
Denis Dmitriyevich Cheryshev dia teraka tamin'ny andro 26th of December 1990 tany Nizhny Novgorod, Rosia. Teraka tany amin-drainy izy, Dmitri Cheryshev izay mpilalao baolina rosiana teo aloha ary mpitantana izao.
Niara-niasa tamin'i Danila zandriny lahy i Denis saingy nandany ampahany lehibe tamin'ny fahazazany tamin'ny rainy malalany, tsy toy ny reniny. Ity ambany ity ny sarin'ny zanany lahy sy ny dadany.
Hatramin'ny fahazatoany, i Denis dia natoky fa ho lasa mpilalao baolina kitra amin'ny ho avy izy. Denis dia nanaraka ny dian'ny rainy ary tia baolina kitra. Ny rainy, Dmitri Cheryshev, kosa dia nanampy tamin'ny fametrahana ny fototra ilaina ilaina mba hijerena ny zanany malalany amin'ny nofinofiny izay tsy nandalo fantasy. Dmitri dadany dia mpilalao malaza tamin'ny FC Dynamo Moscow taloha talohan'ny nifindrany tany Eoropa. Ny fiandrasany tany Eoropa dia nanova ny fiainam-pianakaviany.
Denis Cheryshev ny tantaram-pitiavam-pitiavam-bahaon'ny zaza tantely bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Espaniola velona
Raha dimy taona i Denis, dia nahazo mpilalao baolina kitra avy amin'ny klioba espaniola, Sporting de Gijón ny rainy. Dmitri nanaiky io tolotra io, niala tany Rosia izy ary nifindra tany Espaina niaraka tamin'ny fianakaviany. Rehefa tafapetraka tany Espaina izy, dia nandidy ny sakana amin'ny fiteny ho olana lehibe sy fanamby ho an'ny vady aman-janany, indrindra i Denis izay tokony handray anjara amin'ny académie football. Fantatr'i Denis fa tena ratsy ny vokany, tsy maintsy nianatra espaniola haingana be i Denis.
Tsy maintsy nanatrika ny sekoly fanomanana Espaniola i Little Denis, izay nianatra teny espaniola tamin'ny mpitaiza azy.
Nandritra ireo volana maromaro voalohany, dia tsy azony tsara ny teny iray tamin'ny teny espaniola raha tsy tamin'ny fanampian'ny mpandika teny iray.
Na izany aza, fotoana fohy taorian'izay, i Denis dia kely dia nanjary nahazatra ny kolontsaina Espaniola ary nianatra ny fomba hiteny ny fiteny Espaniola tahaka ny maha-olom-pirenena azy.
Denis Cheryshev ny tantaram-pitiavam-pitiavam-bahaon'ny zaza tantely bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Career BuildUp
Fotoana fohy taorianan'ny fampiofanana sy ny fampiofanana amin'ny teny espaniola, dia nanomboka nanatrika ny sekoly fanatanjahatena Sporting FC i Denis kely, izay nilalao ny rainy tamin'io fotoana io. Izy no 6 taona fony izy niditra ho académie de Sporting Gijon, nijanona tao mandra-pahatongany 9.
Denis Cheryshev taty aoriana dia nanaraka ny dadany tamin'ny klioba manaraka, Burgos, niditra tao amin'ny rafitra tanora nandritra ny taona 9 tamin'ny taona 2000. Taorian'ny roa taona nirotsaka tao Burgos dia niantso ny Real Madrid. Denis Cheryshev dia nanatevin-daharana an'i Real Madrid satria noheverina ho talenta mahafinaritra nandritra ny fitsapana nataony izy. Ity ambany ity dia i Denis Cheryshev kely miaraka amin'ny lobany Real Madrid.
Denis Cheryshev dia tao anatin'ny Real Madrid nandritra ny taona 14, tafiditra tamin'ny klioba tamin'ny taona 12. Tao amin'ny klioban'ny tanora, dia nahita fa nihalehibe izy tamin'ny zatovo mbola ho an'ny olon-dehibe.
Tao amin'ny 2009, i Denis Cheryshev dia nidina tao amin'ilay sehatra niaraka tamin'ny ekipa B ary nandrisika ny tanjona 22 tao amin'ny lalao 109 teo ambany fitarihan'ny Zinedine Zidane. Tamin'izany fotoana izany dia nomena ho "Ny tifitifitra tsara indrindra ao amin'ny ekipa tanora ao Madrid. "Taorian'izany dia niroso tamin'ny ekipa ekipa Real Madrid izy.
Nahoana izy no niala tao Madrid: Denis Cheryshev voasoritra etsy ambany dia nilalao baolina roa ho an'ny ekipa ekipa Real Madrid teo aloha Nanomboka nanafana ny banky izy noho ny fifaninanana henjana eo amin'ny mpilalao zokiny sy zandriny. Ity manaraka ity dia i Denis Cheryshev miaraka amin'ny ekipa Real Madrid.
Taorian'ny fisalasalana nandritra ny volana maromaro, dia nahasosotra ny klioba i Denis. Ao amin'ny dingana hividy ny faharoa sy ny fampandrosoana, Real Madrid, indrisy, dia nanadino ny tanora Cheryshev. Ny fangatahan'i Denis 'handao ny fikambanana dia nolavina, namela azy tamin'ny safidy hindramina.
Nahita làlana telo hitsidihana trosa telo tany Sévilla, Villarreal ary Valencia i Denis. Farany dia niaraka tamin'i Villarreal izy rehefa tapitra ny fifanarahana maharitra tao 2016.
Ny Fandresena ny Mondialy Rosiana 2018: Nahazo laza i Denis Cheryshev rehefa nipoaka tao amin'ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany 2018 FIFA. Raha tsy manoratra be dia be, ny fitomboan-dRavalomanana dia voafafa ao amin'ny sary etsy ambany.
Denis Cheryshev ny tantaram-pitiavam-pitiavam-bahaon'ny zaza tantely bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Relationship Life
Eny, mety tsy ho tsara tarehy toa azy izy Fyodor Smolov sary etsy ambony miaraka amin'ny vadiny taloha, fa i Denis Cheryshev kosa dia miditra amin'ny filazan'ny 10 mpilalao baolina kitra malaza Rosiana ary manome anao ny anton'izany. Tsy nahazo izany fampangatsiahana izany noho ny fahombiazany tao amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany Russia 2018 FIFA, fa noho ny toe-tsainy eoropeanina. Ny marina, ankizivavy, dia mankasitraka ny maha-ara-tsosialy an'i Denis azy noho ny maha-bachelor azy tamin'ny fotoana nanoratana azy.
Raha miresaka momba ny safidiny, iray monja no mihaona ny lalan'i Denis. Tsy hafa izy Cristina Cobo sary eo ambany miaraka amin'ny lehilahy. Cristina sy Denis dia teo amin'ny fifandraisan'izy ireo hatramin'ny 2016.
Ilay sipany mahafinaritra sy beau de Denis Cheryshev dia nianatra tao Madre Ventura Sagrado Corazon Castellon sy ny Oniversite any andrefan'i Ekosy talohan'ny nisoratra anarana tao amin'ny Universitat de Valencia izay nihaonany tamin'ny lehilahy. Ny anabavy kambana tsara tarehy Maria sy ny mamanany dia mipetraka ao Span.
Tahaka ny nanoratany, Cristina dia mpanolotsaina miasa ao amin'ny Arenal Sound ao Borriana, tanàna iray any atsinanan'i Espaina.
Denis dia tia mamoaka ny sarin'ny sipany, Cristina Cobo ao amin'ny pejiny Instagram. Na dia izany aza, i Denis dia tsy nanome fanehoan-kevitra vao haingana momba ny tetikasany ho an'i Cristina.
Denis Cheryshev ny tantaram-pitiavam-pitiavam-bahaon'ny zaza tantely bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Family Background
Ny fianakavian'i Denis Cheryshev dia tsy karazana Rosiana mahazatra ny karazana trano fonenana ary izay tsy tia miala amin'ny faritra mampionona azy ireo hanomboka fanamby vaovao any ampitan-dranomasina.
Denis Cheryshev dia anisan'io fianakaviana io izay mifototra amin'ny finoana fa afaka mandroso any amin'ny firenen-kafa izy ireo afa-tsy amin'i Rosia. Denis Cheryshev manomboka amin'ny reniny, ny rainy, ny rahalahiny, ny anabavy, ny dadatoany, ny nenitoany ary ny havana hafa dia samy nianatra ny hahaleo tena amin'ny rafitra Rosiana.
Mba hampisy izany finoana izany, na dia ny ray Denis, Dmitri Cheryshev misotro ronono avy amin'ny asany matihanina tsy misy ahiahy manolo-tena amin'ny fampiroboroboana ny zanany amin'ny baolina kitra araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany.
Ny tanjona dia ny hanakana azy tsy ho lasa trano fonenana. Indray andro, nanapa-kevitra ny ho tonga mpanazatra baolina kitra ny rain'i Denis. Ity fanapahan-kevitry ny rainy ity dia nahasoa ny asan'i Denis. Ity ambany ity ny sarin'i Dmitri ho mpitantana.
Raha mikasika ny fianakavian'i Denis Cheryshev, dia tapitra ny farany amin'ny fiandrasana ny voninahitra. Ny fanehoana an'i Denis ao amin'ny World Cup 2018 dia nahatonga tokoa ny fiovana ho amin'ny asany, ny fiainany manokana ary ny lazan'ny fianakaviana.
FACT CHECK: Misaotra namaky ny tantaram-pianakavian'i Denis Cheryshev momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Daty efa namboarina: 28 Desambra 2018